Dawlada Itoobiya oo ka hadashay Safarka Madaxweynaha Somaliland ku tagay Dalka Jabuuti
Itoobiya oo ka hadashay Safarka Madaxweynaha Somaliland ku Tagay Dalka Jabuuti
Addis Ababa (TNN) :-Dawladda Itoobiya ayaa ka hadashaday Safarka uu Madaxweynaha Somaliland Mu use Biixi Cabdi uu ku tagay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti.
Warbixinta toddobaadlaha ah ee “The Horn” ee ay wasaaradda arrimaha dibedda ee dawladda Itoobiya ku falanqayso gobalka Geeska Afrika, ayaa waxay shalay ku soo qaadday Socdaalka uu Madaxweynaha Somaliland ku tagay Jabuuti, waxayna sheegtay in Madaxweynuhu uu Jabuuti ku tagay marti-qaad uu ka helay Dhiggiisa Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
Wasaaradda Arrimaha dibedda ee Itoobiya ayaa qoraalka socdaalka Madaxweynaha Somaliland kaga ha dashay ku tidhi “Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, ayay Jabuuti ku qaabishay soo dhaweyn a y roog cas u dhigtay, ka dib in ka badan toddobaad socdaalkiisii uu ku tagay Kenya ee ka cadhaysiiyey M uqdisho, kaasi oo sababay in xidhiidhada la isku jaro. Madaxweyne Biixi wuxuu Subaxnimadii Arbacada uu Jabuuti socdaal rasmiya oo uu Marti-qaad kaga helay Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, sida ay sheeg tay Wasaaradda Arrimaha dibedda iyo iskaashiga Caalamiga ah.”
Dawladda Itoobiya ayaa waxa kale oo ay qoraalkeeda ku sheegtay “Toddobaadkii hore, Madaxweyneyaa sha Dawladaha ku bahooday IGAD oo ku kulmay Jabuuti ayaa ka codsaday labada dhinac (Somaliland iyo Soomaaliya) inay sii wadaan Wada-hadallada “Goluhu wuxuu codsaday dib u bilaabista Wada-hadallada Somaliland iyo Soomaaliya, waxaanu bogaadiyey doorka Madaxda Gobolka ee qabashada iyo fududaynta Wada-hadallada..” ayay qoraalkeeda ku sheegtay Wasaaradda Arrimaha dibedda ee Itoobiya.
Dawladda Itoobiya ayaa labadii Toddobaad ee u dambeeyay la socotay dhaqdhaqaaqa diblumaasiyadeed ee Madaxweynaha Somaliland.